Umaka: 2016 | Martech Zone
Kungakanani Okuqukethwe Okukhiqizwa Ku-inthanethi kumasekhondi angama-60?
NgoLwesibili, ngoJuni 6, i-2017 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
kungenzeka ukuthi uqaphele ukuphumula ekubhaleni kwami ​​kwakamuva. Ngenkathi ukushicilela nsuku zonke sekuyingxenye ye-DNA yami eminyakeni yamuva nje, ngiphonswe nenselelo yokuthuthukisa isiza nokunikeza izici eziningi. Izolo, isibonelo, ngaqhubeka nephrojekthi ukuhlanganisa izincomo whitepaper olufanele isayithi. Kuyinto umsebenzi mina ahlehliswa esingangonyaka edlule futhi ngakho ngathatha isikhathi sami zibhalwe futhi yaba esephepheni
NgoMsombuluko, Januwari 23, 2017 NgoMsombuluko, Januwari 23, 2017 Douglas Karr
Sikujabulele kakhulu ukwakheka kwethu kwangaphambilini eMartech kepha besazi ukuthi kubonakala ngathi kukhulile Yize ibisebenza, ayitholanga izivakashi ezintsha njengakuqala. Ngikholwa ukuthi abantu bafike kusayithi, bacabanga ukuthi kusemuva kancane ekwakhiweni kwayo - futhi bacabanga ukuthi nokuqukethwe kungenzeka. Kalula nje, saba nengane embi. Besiyithanda leyongane, sisebenze kanzima kuyo
Ukusethela Impumelelo Yokumaketha ngo-2017
Lwesibili, Disemba 20, 2016 UStephen Morgan
Ngenkathi isikhathi sikaKhisimusi singahle siqhubeke, njengoba kuhlelwa amaqembu ezisebenzi futhi ama-mince pie enza imizuliswano yehhovisi, lesi yisikhathi futhi sokucabanga ngaphambi kuka-2017 ukuqinisekisa ukuthi esikhathini sezinyanga eziyi-12, abathengisi bazobe begubha impumelelo abayibonile. Yize ama-CMO ezweni lonke kungenzeka ukuthi aphefumula kamnandi ngemuva kowe-2016 oyinselele, manje akusona isikhathi sokunganaki. Ku-
Ukunciphisa Izinqola Ezilahlekile
NgoLwesithathu, uDisemba 14, 2016 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 UC Curt Bloom
Ngisanda kubuka ividiyo yomphathi weTarget emi phezu kokuphuma kwakhe, ethula inkulumo evusa isifuba kubasebenzi bakhe ngaphambi kokuvula umnyango wabathengi beBlack Friday, ehlanganisa amabutho akhe sengathi ubalungiselela impi. Ngo-2016, i-mayhem eyayiyi-Black Friday yayinkulu kunangaphambili. Yize abathengi basebenzise imali elinganiselwa ku- $ 10 engaphansi kwalabo abakwenze ngonyaka owedlule, bekunabathengi abengeziwe abayizigidi ezintathu ngaphezulu kweBlack Friday ngo-2016 kunaku-
Izindlela Eziyisihluthulelo Ezi-7 ze-SEO Okufanele Uzisebenzise ngo-2016
ULwesine, May 12, 2016 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Eminyakeni embalwa eyedlule, ngabhala ukuthi i-SEO ifile. Isihloko besiphezudlwana ngaphezulu, kepha ngimi ngokuqukethwe. I-Google ibibamba ngokushesha imboni ebiyizinjini zokusesha nokudlala futhi okuholele ekutheni ikhwalithi yezinjini zokusesha yehle kakhulu. Bakhiphe uchungechunge lwama-algorithms angenzanga nje kube nzima ukusebenzisa amazinga okusesha, baze bangcwaba labo ababathola benza i-blackhat SEO. Akukona lokho
Uphi uWesley? Impumelelo ye-SXSW kusabelomali esincane
NgoMgqibelo, Ephreli 30, 2016 NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 29, i-2016 UWesley Faulkner
Njengoba i-SXSW isemuva kwethu nje, izinkampani eziningi zihleli emakamelweni ebhodi zizibuza zona, Kungani singatholanga lutho ku-SXSW? Abaningi baze bazibuze ukuthi ngabe imali enkulu abayichithile yamane yachitha .. Njenge-mecca yezinkampani zobuchwepheshe, yindawo ekahle yokuqwashisa ngomkhiqizo, kepha kungani izinkampani eziningi zehluleka kulo mbuthano omkhulu wobuchwepheshe? Izibalo zabahlanganyeli bomkhosi we-SXSW Interactive 2016: 37,660 (kusuka
Amathrendi nokuqagela komhlaba wonke ngo-2016
ULwesine, April 28, 2016 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Sibhale mayelana nokuthi yikuphi ukukhangisa kohlelo osekupheleni konyaka odlule futhi senze ingxoxo enhle nochwepheshe uPete Kluge ovela ku-Adobe ngesihloko. Imboni ihambisa umbani ngokushesha. Anginasiqiniseko sokuthi izinhlelo zokuthengwa kwezikhangiso zendabuko ezidinga ukungenelela mathupha ukuze zisebenze kahle zizohlala. Empeleni, ukusetshenziswa kwemali kohlelo lwezikhangiso kulindeleke ukuthi kuthathe ama-63% emakethe yokubukisa ngokwedijithali ngasekupheleni kwalo nyaka ngokusho kweMarketer. Ukuhlanganiswa kobuchwepheshe besikhangiso nobuchwepheshe be-mar